Filtrer les éléments par date : jeudi, 04 juillet 2019
jeudi, 04 juillet 2019 22:32
Kitra - « Saint-Nazaire Atlantique Football » : « Monsieur Lala » teratany Malagasy no tompony
Manomboka miditra amin’ny tontolon’ny fandraharahana amin’ny baolina kitra matihanina any Frantsa ny Malagasy. Fantatra izao fa novidian’ilay teratany Malagasy antsoina hoe: Razanajatovo Lalanirina ny « Saint-Nazaire Atlantique Football » na SNAF, klioba baolina kitra amin’ny diviziona fahatelo any Frantsa.
Lasa filohan’ity klioban’ny SNAF ity i « Monsieur Lala » araka fiantsoan’ny olona azy, nanomboka tamin’ny 1 jolay 2019 teo.
Razanajatovo Lala izao no filohan’ny SNAF, Jérôme Ameline, no filoha lefitra, ary Jonathan-Joseph Augustin, no tale ara-panatanjahantena.
Fanambin’i « Monsieur Lala » ny hivoaran’ny kliobany ao amin’ny « National 3 » amin’ny taom-pilalaovana manaraka.
jeudi, 04 juillet 2019 22:26
Ankadifotsy-Antananarivo: Nirotsaka nanamboatra lalana ny Polisy
Nirotsaka nandray andraikitra ny ekipan'ny Polisim-pirenena ao amin’ny Kaomisarian’ny Boriborintany faha-3 (CSP3 Antaninandro) nanototra ny lavaka, ary namboatra ny lalana teo amin'ny faritra Super Maki Ankadifotsy Boriborintany faha-III, Antananarivo Renivohitra.
Miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana ary mampitaraina ny mpampiasa lalana ny fisian’ny lavaka amin’ny lalana teo amin’io faritra io, ka fisorohana izany indrindra no voalaza fa nanosika ny Polisy avy amin’ny CSP3 nandray andraikitra.
jeudi, 04 juillet 2019 20:36
Razanajoelina Clotilde: Nanome toromarika ny Filoha hitondra azy ho any Egypta, fa tsy afaka ny renin'ny Barea
Voarain'ny Filoaham-pirenena soamantsara ny hafatra momba ny renin'ny Barea, Razanajoelina Clotilde, ary nanome toro-marika izy ny ampakarana aingana an'i ramatoa Clotilde amin'ny fiaramanidina avy any Mahajanga, ary anamboatra ny pasipôro, fa hiaraka amin'ny Filoham-pirenena i Clotilde ho any Egypta amin'ny fanohanana ny Barea, hiatrika ny ampahavalon-dalana amin'ny fifaninanana baolina kitra CAN 2019.
Tsy niandry ela ny tao amin'ny fiadidiana ny Repoblika nampita ny hafatra tamin'i ramatoa Clotilde, fa noho ny naha-terabao ny zanany, izay nodidiana teo am-piterahana, dia niala tsiny mafy tamin'ny Filoham-pirenena ramatoa Clotilde, na dia feno teo aminy aza ny faniriana ny andeha hiaraka amin'ny filoham-pirenena hiazo an'i Egypta.
Nampita hafatra taminy moa ny Filoha Andry Rajoelina, amin'ny firariana fahasalamana ho an-janany izay mbola any amin'ny hopitaly, ary niarahaba azy amin'ny fahazoany zafikely, ary nampanatena ny filoha fa tsy maintsy misy fotoana iarahan'i Razanajoelina Clotilde aminy aoriana.
jeudi, 04 juillet 2019 15:42
Vono olona teo Tanjombato: Mpitandro ny filaminana ny 02 tamin’ireo jiolahy
Karana, mpandraharaha, no lasibatra tamin’ity fanafihana mitam-piadiana niafara tamina vono olona nitranga teo Tanjombato – Antananarivo ity ny 31 janoary 2019.
Mpiasan’ilay karana no mpanome vaovao an’ireo olon-dratsy, nilaza fa nitondra vola be ilay karana ary efa lasa nivoaka ny toeram-piasany. Anjaran’ireto jiolahy no nanatanteraka ny sisa ary nitifitra sy naka ny volan’ilay karana tetsy Tanjombato.
Nandray an-tanana ny raharaha ny Polisy ao amin’ny sakelika BC3. Nosamborina avy hatrany io mpiasa io ary notadiavina ireo jiolahy nanao ny asa ratsy. Ny 30 jona 2019 no tratra tao an-tranony ny jiolahy iray, ary ity farany indray no nanoro ny namany hafa, miisa efatra, izay mpitandro ny filaminana ny roa amin’izy ireo.
jeudi, 04 juillet 2019 15:38
Loza teo Mahamasina: Maratra 5 mbola tavela ao amin’ny HJRA
Mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ny dimy tamin’ireo naratra vokatry ny fifanosehana teo am-bavahadin’ny Kianjaben’i Mahamasina hijery « Podium » ny harivan’ny 26 jona 2019. Mbola ao amin’ny efitra fameloman’aina ny roa amin’izy dimy ireo.
Ministeran’ny serasera sy kolontsaina: Mpiasa ECD miisa 20 mahery tapaka « contrat »
Nontanterahina ny velirano. Mpiasa ECD miisa 20 mahery no nahazo taratasy manafoana ny fifanarahana arak’asa (contrat de travail) tao amin’ny Ministeran’ny kolontsaina sy serasera androany maraina. Misy amin’ireo no efa niasa aman-taonany maro.
Nialoha izao fanafoanana « contrat » izao dia efa noterena hanasonia ny fanovana ho enim-bolana fotsiny ny « contrat » herintaona teo aloha izy ireo.
jeudi, 04 juillet 2019 15:19
Antananarivo Renivohitra: Mihamivangongo ny fako eny amin’ireo toeram-panariana fako
Toerana maro eto an-drenivohitra no ahitana fako mivangongo eny amin’ny dabam-pako hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity.
Ny Kaominina Antananarivo renivohitra sy ny RF2 no mpanadio tanàna sy manatitra fako mankeny amin’ireo dabam-pako. Ny SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) no miandraikitra ny fitaomana ny fako miala eny amin’ireo dabam-pako mankeny Andralanitra.
jeudi, 04 juillet 2019 15:14
Fandraharahana ny fonja: Hankalazaina amn’ny 18 jolay 2019 ny faha-60 taonany
Vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny EKAR Faravohitra, tamin’ny 2 aprily 2019 no nisantarana ity fankalazana faha-60 taonan’ny Fandraharahana ny fonja ity.
jeudi, 04 juillet 2019 15:11
Morondava: Ametrahana foibe famokarana angovo avy amin’ny masoandro manana tanjaka 5 MWatt
Tonga teto Morondava, Renivohitry ny faritra Menabe ry zareo avy amin'ny orinasa Elsewedy Electric Egypt sy ny See Mada, nidina ifotony niaraka amin'ireo teknisianina avy amin'ny Ministeran'ny Angovo, ny Talen'ny Fampandrosoana ny Faritra, ny Ben'ny Tanànan'i Morondava, ny Talem-paritry ny JIRAMA, nijery ny toerana azo ametrahana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro, manana tanjaka 5 MWatt, hamatsy ny tanànan'i Morondava sy Mahabo.
jeudi, 04 juillet 2019 14:19
Antenimieram-pirenena: Hivory voalohany amin’ny 16 jolay 2019
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra natao teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny didim-panjakana miantso ireo solombavambahoaka miisa 151 vao voafidy farany teo, hivory voalohany eny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny Talata 16 jolay 2019 manomboka amin’ny 10ora maraina.
Lahadinika amin’izany ny fifidianana ny mpikambana handrafitra ny Birao maharitra sy ny fifidianana ny mpikambana handrafitra ireo vaomiera isan-tokony.